किन पिएसजीमा भइरहेको छ नेमारको आलोचना? - Everest Dainik - News from Nepal
किन पिएसजीमा भइरहेको छ नेमारको आलोचना?
एजेन्सी । नेमार पछिल्लो समयका सर्वाधिक महँगा स्टार मध्येमा पर्छन्। तर उनी फ्रेन्च लिग वानको नयाँ सिजन सुरु भएसँगै उनी थप आलोचित भइरहेका छन्। त्यसोत नेमार पिएसजीमा गत सिजनदेखिने विवादित बनिरहेका छन्। उनीमाथि पिएसजी समर्थक आक्रोसित हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको उनले पिएसजी आफू नरहने घोषणा गर्नु हो।
याे पनि पढ्नुस अग्रिम जन्मदिनको पार्टी लगत्तै घोषणा भएको टिममा नेइमार बाहिर
युरोपमा फुटबलको नयाँ सिजन सुरु भएसँगै नेमारलाई पनि पिएसजीले नखेलाउने बताएको छ। योसँगै उनको भविष्यलाई लिएर नै चिन्ता छाएको छ। नेमारबिनाको खेलमा पीएसजीले निम्स क्लबमाथि ३–० को जितहातपार्दा अधिकांश समर्थकले नेमारविरुद्ध हुटिङ गरेका थिए। पिएसजीको जितमा एमबाप्पे, काभानी र डि मारियाले समान एक एक गोल गरे।
याे पनि पढ्नुस नेइमारको शानदार प्रदर्शनमा पिएसजी फ्रेन्च लिग कपको सेमिफाइनलमा
नेमारविरुद्ध आक्रोशित पीएसजीकै समर्थकले नेमारविरद्ध नारा लगाएका थिए। उनीहरूले ‘नेमार हामीलाई चाहिँदैन’ भन्ने नारा लगाएका थिए। उनीहरूले त्यस्तै पोस्टरहरू बोकेको दृश्य प्रष्ट देखिएको थियो। यद्यपि उनी बार्सिलोना अनुबन्ध हुने हल्ला चलेको थियो। यतिबेला उनी म्याड्रिड जाने चर्चाले पुन एकपटक चर्चा चलेको छ। तर अब उनी अन्त जहाँ जान सक्छन्। तर पिएसजीमा नेमार रहने संभावना अब छैन।
ट्याग्स: नेमार, पिएसजी